Ogaden News Agency (ONA) – Wufuudii ka qaybgali lahayd shirweynaha jaaliyadaha oo bilowday
Wufuudii ka qaybgali lahayd shirweynaha jaaliyadaha oo bilowday
Shirweynaha Jaaliyadaha oo sanadkan ay martigalisay Jaaliyadaha Canada ayaa wufuudii ka qaybgali lahayd ay gaadheen hordhacoodii Toronto oo ah goobta lagu qabanayo shirweynaha.
Wafdi uu hogaaminayo Abwaan Maxamud Axmad jango ayaa ka dagay garoonka caalamiga ah ee Toronto halkaasoo ay gacma furan iyo ubax ku soo dhaweeyeen ergo ka socotay Guddiga Qabanqabada Shirweynaha.
Waxaa la filayaa shirweynaha sanadkan inuu noqon doono mid ka duwan shirarkii hore sida ay sheegeen guddiga qaban-qaabada shirka, iyadoo arima farabadan ay ku falanqayn doonaan ergooyinka ka kala socda jaaliyadaha.
Waxaa kaloo lagu martiqaaday shirweynaha oo ka qaybgali doona ergooyin ka iman doona jaaliyadaha dariska la’aha Ogadenya, mucaaradka xukuumadda macangaga ah ee Itobiya, iyo aqoonyahano iyo siyaasiyiin reer Canada ah.
Waxaa kaloo garab socda wada-tashiga iyo doodaha ay isweydaarsanayaan xubnaha ka kala socda jaaliyadaha caalamka, aqoon-isweydaarsi iyo siminaaro loo diyaariyay. Sidoo kale Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda (OYSU) ee Canada ayaa barnaamij ay u diyaariyeen kaga qaybgali doona shirweynaha.